Diyopost.com :: विश्वकप महाकुम्भ : आज तिन खेल हुँदै, ब्राजिल र जर्मनी सहज जित हाँसिल गर्ने दाउमा ! विश्वकप महाकुम्भ : आज तिन खेल हुँदै, ब्राजिल र जर्मनी सहज जित हाँसिल गर्ने दाउमा ! - Diyopost.com
विश्वकप महाकुम्भ : आज तिन खेल हुँदै, ब्राजिल र जर्मनी सहज जित हाँसिल गर्ने दाउमा !
काठमाडौँ । विश्वकप फुटबलमा आईतबार राति तिन खेलहरु हुने भएका छन । समुह ‘इ’ का दुई खेल र समुह ‘एफ’को एक खेल गरि कुल तिन खेल हुने भएको छ । गएराति अर्जेन्टिना र आईसल्याण्ड बिच भएको खेल १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ । दोस्रो खेल फ्रान्स र अस्ट्रेलिया तथा तेस्रो खेल पेरु र डेनमार्क बिच भएको थियो भने समुह चरणकै अर्को खेल क्रोएशिया र नाईजेरिया बिच भएको थियो । खेलमा फ्रान्स २–१ ,डेनमार्क १–० तथा क्रोयशिया २–० ले विजयी भएको थियो । आज हुने खेललाई विशेष रुपमा फुटबल विशेषज्ञहरुले लिएका छन । समुह ई मा सबै टोलीहरु कडा प्रतिस्पर्धीहरु रहेका छन । समुह ई मा ब्राजिल, स्विजरल्याण्ड, कोस्टा रिका र सर्विया रहेका छन । ब्राजिल विश्वकप २०१४ मा लागेको दाग मेटाउने लक्षमा रहेको छ । ब्राजिल संग खेल्न लागेको स्विजरल्याण्ड अंक बाँड्ने दाउमा रहेको छ । ब्राजिलका सुपरस्टार नेयमार यो सिजनमा पुर्ण फिट रहेका र उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने दाउमा रहेका छन ।
ब्राजिल भर्सेज स्विजरल्याण्ड
समुह ई को दुई उत्कृष्ट टिमको रुपमा ब्राजिल र स्विजरल्याण्ड रहेका छन । विश्वकपमा सर्वाधिक विजेता बनेको ब्राजिलले अहिले सम्म कुल पाँच पटक विश्वकपको उपाधि उचालिरहेको छ । २०१४ को विश्वकपमा भने लज्जास्पद हार व्यहोरेको थियो । हारको वदला लिनको लागी यसपटकको विश्वकपको उपाधी उचाल्ने दाउमा रहेको छ । यता १० पटक सम्म विश्वकप खेल्ने अवसर पाएको आईसल्याण्ड ३ पटकसम्म सेमिफाईनलसम्म पुगेको थियो ।
ब्राजिलको गोलकिपरमा एलिसन, एडेरसन, क्यासियो रहेका छन । रक्षापंक्तिमा मिरान्डा, मार्किन्होस, थियागो सिल्भा, मार्सेलो, फिलिप लुईस, ड्यानिलो, फाग्नर, पेड्रो गेरोमेल लगायतका उत्कृठ खेलाडीहरु रहेका छन । मिडफिल्डमा क्यासेमिरो, फर्नान्डिन्हो , पाउलिन्हो, रेनाटो अगस्तो, विलियन, फ्रेड, फिलिप कोटिन्हो रहेका छन । टोलिको फरवार्डमा ग्याव्रियल जिसस, रोबर्टो फर्मिनो डगलस कोस्टा, टाईसन र नेयमार जस्ता विश्वका उत्कृष्ठ खेलाडी हरु रहेका छन ।
यसपटकको विश्वकपमा उत्कृष्ठ १६ सम्म पुग्न सक्ने टिमको रुपमा हेरिएको स्विजरल्याण्डमा ग्रानिट जाखा, रिकार्दो रोद्रिगेज, फाबियन स्कर र जेण्डर साकिरी जस्ता उत्कृष्ठ खेलाडी रहेका छन् । यी लगायत नयाँ युवा खेलाडी ब्रिल इम्बोलो र इण्मिलसन फर्नानडेज रहेका छन् जसले यस विश्वकपमा आफ्नो छाप छोड्ने तयारीमा रहेका छन् । अन्तिम १६ मा छनोट हुन स्वीजरल्याण्डले कठिन यात्रा गर्नुपर्ने फुटबल विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
जर्मनी भर्सेज मेक्सिको
सन २०१४ को विश्वकप विजेत जर्मनी यसपटक पनि विश्वकपको उपाधी जित्ने दाउमा रहेको छ । नयाँ तथा युवा खेलाडीहरुलाई अवसर दिने जर्मनको खेल उत्साह जनक र आक्रमक हुने गर्दछ । यसपटकको समुह चरणको खेलमा जर्मनको सामना मेक्सिकोले गर्दै छ । खेल आज राति ८ः४५ मा रसियाको लुझनिकी स्टेडियममा हुने भएको छ । ब्राजिल पछि सर्वाधिक विश्वकप विजेता बन्न सफल भएको जर्मनले अहिले सम्मको यात्रामा चारपटक विश्वकपको च्याम्पियन भईसकेको छ । उत्कृष्ट लयमा रहेका जर्मनलाई रोक्नको लागी मेक्सिकोलाई चुनौति जरुर हुने देखिन्छ यद्यपी मेक्सिको पनि हालसम्म १६ पटक सम्म विश्वकप खेल्दा २ पटक सेमिफाईनलसम्म पुगेको छ । सन २०१४ मा नकआउट चरणसम्म मेक्सिको पुगेको थियो ।
जर्मनीको राष्ट्रिय टोलीको गोलरक्षकमा बर्न्ड लेनो, मानुयल नेउर, मार्क आन्द्रे टर स्टेजेन र केभिन ट्र्याप रहेका छन । टोलीको रक्षापङितमा
जेरोमी बोआटेङ, म्याथ्यियास गिन्टर, जोनास हेक्टर, म्याट्स ह्युमेल्स, जोसुआ किम्मिच,मार्विन प्लाटेनहार्ट, एन्टोनियो रुडिगर,निकलास सुल र जोनाथन ताह रहेका छन । मिडफिल्डर र फरवार्डमा जुलियान ब्रान्ड्ट , जुलियान ड्राक्जलर, मारियो गोमेज,लेओन गोरेटज्का , इल्के गुन्डोगान, सामी खेडिरा, टोनी क्रुज , थोमस मुलर , मेसुट ओजिल, निल्स पिटर्सन ,मार्को रियस, सेबास्टियन रुडी,लेरो सेन र तिमो वेर्नर रहेका छन ।
युवा खेलाडीहरुले भरिएको मेक्सिकन टोलीको गोलकिपरमा गुइलमेरो ओचुवा, अलफ्रेडो टालाभेरा, जेसस कोरोना
डिफेण्डरहरुमा डिएगो रिएस, कार्लोस सालसेडो, हेक्टर मोनेरो, ओस्वाल्डो एलानिस, नेस्टर एरोउजो, मिगुइल लेउन, जेसस गालार्डो, हुगो आयला, इडसन अलाभेरेज रहेका छन । टोलीको मिडफिल्डर्सः हेक्टर हेरेरा, एद्रिस गुआडाडो, राफा मार्कुएज, जोनाथन डस सान्तोस, मार्को फाबियन, जेसस मोलिना, इरिक गुटिएरेज, जियोभानी डस सान्तोष लगायतका खेलाडीहरु रहेका छन भने स्टाइकरमा जाभियर एन्कुइनो, जेसस टेकाटिटो कोरोना, राउल जिमेनेज, ओरिभ पेराल्टा, जाभियर हर्नानडेज, कार्लोस भेला, हिरभिङ लोजानो, उर्गेन ड्याम रहेका छन ।
एन्फामा आर्थिक चलखेलः फिफा र एएफसीमा गोप्य प्रमाण पेश !
काठमाडौं, असोज ९ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा को पछिल्लो निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका प्रत्याशी रहेका मणि कुँवरले चुनावका बेला ...
काठमाडौँ, ८ असोज , यही असोज १५ देखि २६ गतेसम्म बङ्गलादेशमा हुने बङ्गबन्धु गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल ताजाकिस्तानसँग ...
काठमाडौँ, ७ असोज। एएफसी यु–१६ महिला च्याम्पियनसिपअन्र्तगत छनोट चरणकौ अन्तिम खेलमा नेपालले मलेसियासँग बराबरी खेलको छ । हल्चोकस्थित एपिएफ क्लबको ...
लुका मेड्रिकलाई ८ महिना जेल, ८ लाख ७० हजार युरो जरिवाना, ८ महिना निलम्बन !
काठमाडौं, ७ असोज । सन् २०१८ को फिफा विश्वकपका उत्कृष्ठ खेलाडी मध्येका एक मिडफिल्डर लुका मोडरिकलाई ८ महिना जेल सजाय ...
टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रगियोगिता कात्तिक ८ देखि !
बैतडी, असोज ७ । नेपालीहरूको महान् पर्व विजयादशमी तथा दीपावलीको अवसरमा आगामी कात्तिक दोस्रो सातादेखि बैतडीमा निङ्गलाशैनी प्रिमियर लिग एनपीएल ...
यी हुन मनग्य आम्दानी गर्ने नेपाली खेलाडी जो खेलबाटै मासिक लाखौँ कमाउँछन
काठमाडौँ, ६ असोज । खेलकुदमा लागेर नेपालमा जीवन धान्न गाह्रो छ भन्ने अधिकांश खेलाडीको गुनासो छ । हुन पनि पुर्वाधारको ...
खेल टिमका अर्बपति मालिकहरु !
काठमाडौं, असोज ६ । मानिसका थरीथरीका सोख हुन्छन् । यसको निर्धारण चाँही पैसाले गर्दोरहेछ । अझ विश्वका धनाढ्यहरुको त कुरै ...
च्याम्पियन्स लिगमा मेसीको नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौँ, ४ असोज । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसीले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगतामा सर्वाधिक ह्याट्रिकको नयाँ रेकर्ड राखेका छन ...
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगः पहिलो खेलमा एनआरटी र आर्मी भिड्ने (खेलतालिकासहित)
कुमार चौलागाई काठमाडौँ, ३ असोज । यही असोज १३ गतेदेखि शुरु हुने शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलको उद्घाटन ...